Itoobiya Oo Dalbatay In La Hakiyo Wada-Hadallada Webiga Nile | Somaliland Mirror
Home WARARKA Itoobiya Oo Dalbatay In La Hakiyo Wada-Hadallada Webiga Nile
Dowladda Itoobiya ayaa Arbacadii weydiisatay Mareykanka in la hakiyo wada-hadallo la filayey in maaanta ay dib uga furmaan Washington oo ku saabsan muranka ka taagan biyo-xidheenka ay ka sameyneyso webiga Nile.
“Waxaan weydiisanay inaan u baahannahay waqti dheeri ah oo aan wada tashiyo ku sameyno,” waxaa sidaas yidhi Bizuneh Tolcha oo ah afhayeenka wasaaradda biyaha, waraabka iyo tamarta Ethiopia.
Masar, Itoobiya iyo Sudan ayaa 31-kii Janaayo sheegay inay dhammaadka bishan saxeexi doonaan heshiis lagu soo geba-gebeynayo khilaafkooda ku aadan heerka la biyo buuixinayo iyo sida uu u howl-galayo Biyo-xidheenka Dib Curashada Weyn ee Itoobiya (GERD).
Itoobiya ayaa biyo-xidheenka ka dhiseysa meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto Sudan, oo uu ku qul-qulo webiga Nile, kaasi oo ah isha ugu weyn ee ay biyaha ka helaan 100 milyan ee qof ee ku nool Masar.
Biyo-xidheenka ayaa qeyb ka ah qorshe ay Itoobiya ku dooneyso inay ku noqoto dalka ugu weyn Afrika ee korontada dhoofiya.
Previous Post“Doorashada Waxa Noo Qabanaya Komishankii Hore…” Guddoomiye Cirro Next PostSacuudiga oo Soomaaliya ku daray dalalka uu aafeeyay cudurka Coronavirus, isagoo Soomaaliya iyo dalalka la mid ahba u diiday fiisaha dalxiiska iyo cumrada.